IMacOS 10.13.1 ngoku iyafumaneka, kunye ne-iTunes 12.7.1 kwiVenkile ye-Mac App | Ndisuka mac
IMacOS 10.13.1 ngoku iyafumaneka, kunye ne-iTunes 12.7.1 kwiVenkile yeApple yeMac
Imizuzu embalwa, UApple ukhuphe ingxelo yokugqibela ye-macOS 10.13.1. Namhlanje lusuku lweenguqulelo ezintsha, kuba ngale mvakwemini sibona iinguqulelo ezintsha zazo zonke iinkqubo ezisebenzayo zeApple. Okokugqibela ukukhutshwa kube yinguqulelo yeMac.Iyokuqala kwaye eyona nto ibaluleke kakhulu kwezi ntlobo zohlaziyo kukuvala zonke ezo ngxaki zokhuseleko ezihlala zifunyanwa ngabagculeli kwaye iApple isebenza ngokukhawuleza xa ivala. Nangona kunjalo, ngohlaziyo oluncedisayo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, uninzi lwemicimbi bekufanele ukuba isonjululwe.
Kodwa ukongeza koko, sifumana:
I-emojis entsha, ukuze unxibelelwano lube yinto enomvuzo ngakumbi.
Ukulungiswa kwe-bug ebangele ukunqunyulwa kwebluetooth, xa intengiselwano yayiqhubeka neApple Pay.
Iphucula ukuthembeka Ungqamaniso lomyalezo we-imeyile kwiMicrosoft Exchange.
Okokugqibela, asiboni ubuncinci ngalo mzuzu kumanqaku ka-Apple, ukulungiswa kwefayile ye- Imposiso ngamaqhosha esandi kwikhibhodi yeMac. Kuyabonakala ukuba, abanye abasebenzisi bakhalaza ukuba iSafari yenza ukuba kungabi lula ukusebenzisa ulawulo lwevolumu xa utshintsha usetyenziso. Umzekelo, ukulawula ulawulo lwebhodi yezitshixo kwi-iTunes, xa besikade sikwenzile kwi-Safari. Siza kubona kubhabho ukuba ngaba usabele kuyo.
Kulungile ngokukhuphela uhlaziyo, uhlaziyo lwe I-iTunes ngokukodwa inguqulelo engu-12.7.1. Kule meko, iApple "ipolishe kwaye yajijisa" usetyenziso, ukulungisa iibugs kunye nokuphuculwa kokusebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IMacOS 10.13.1 ngoku iyafumaneka, kunye ne-iTunes 12.7.1 kwiVenkile yeApple yeMac
I-tvOS 11.1 ikwakhona kwiApple TV